किन अमेरिकामा यति धेरै बालिकाहरु दुलही बनिरहेका छन् ? |
किन अमेरिकामा यति धेरै बालिकाहरु दुलही बनिरहेका छन् ?
प्रकाशित मिति :2017-11-01 15:16:45
एन्जेल मक्गीन १३ वर्षकी हुँदा उनकी आमाले उनलाई कर गरेर विवाह गराइन् र घरजम थाल्न लगाइन् । ‘मैले एक दासी जस्तै महसुस गरें ।’ उनले आफ्नो बाल्यकाल सम्झिदै भनिन् ।
एन्जेल अहिले २६ वर्षकी भइन् । उनका पाँच जना बच्चाहरु छन् । उनले पुनर्विवाहपनि गरिन् ।
अरु देशहरु जस्तै गुवाटेमाला, हाेन्डुरस, मलावी, एलसाल्भाडोर, जिम्बावे, तान्जेनीया र गाम्बीयाले तीन वर्षअघि बालविवाहमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
संयुत्त राज्य अमेरिकामा भने यो अझै वैध छ । यस देशका आधा राज्यहरुमा (प्रान्तहरुमा) विवाह गर्ने उमेरमा हदबन्दी लगाइएको छैन । उमेरको हदबन्दी तोकिएको ठाउँमा पनि १३÷ १४ वर्ष वा सो भन्दामुनि मात्र विवाह गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
बिबिसी समाचारले विश्वकै धनी देश संयुत्त राज्य अमेरिका किन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापनमा स्वास्थ्य र सामाजिक मुद्दाहरुमा पछाडि परेको देखिन्छ भनेर खोजी गरिरहेको छ ।
बिबिसीको भिडियो रिपोर्ट अनुसार संयुत्त राज्य अमेरिकाका राज्यहरुमा बालविवाहले कानूनी मान्यता पाइरहेको छ । यो देशमा सन् २००० देखि २०१५ सम्म दुई लाख नाबालकहरुको विवाह भएको थियो ।
एन्जेलले विवाहपछि श्रीमानको दुव्र्यवहार र हिंसापनि भोगिन् । उक्त भिडियोमा आफू भावनात्मक द्वन्द्वहरुसँग लडिरहेको कुरापनि बताइन् । ‘…चाँडै विवाह नभएको भए फरक किसिमले जीवन बिताउन पाउने थिएँ जस्तो लाग्छ ।’ उनले भनिन् ।
अन्चेन्ड एट लास्ट नामक संस्थाकी फ्रेडी रेसे भन्छिन्– संयुत्त राज्य अमेरिकाले अरु देशहरुमा आफ्नो परराष्ट्र नीति मार्फत १८ वर्षमूनि विवाह गर्नु भनेको मानव अधिकारको हनन हो र बालविवाह रोक्नुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेको छ । तर यो देशका सबै ५० वटा राज्यहरुमा १८ वर्षमूनि गरिने विवाहले भने कानूनी मान्यता पाएको छ ।’
उनको संस्थामा धेरै जसो पीडित बालिकाहरु परामर्शकोलागि आउँछन् । फल्लोरिडा लगायत राज्यहरुमा विवाहको लागि न्यूनतम उमेर कानूनमा तोक्न र बालविवाहको अन्त्य गर्न पैरवी भइरहेको छ ।